Levitikosy 26.1-20 : SAROBIDY NY FANKATOAVANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA | Fitandremana Ankadifotsy
Levitikosy 26.1-20 : SAROBIDY NY FANKATOAVANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
SAROBIDY NY FANKATOAVANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Israely, firenena voafidin’Andriamanitra, nafahany tamin’ny fanandevozana ary nanaovany fanekena no resahana eto (1, 2, 13, 44, 45; Eksodosy 20.2).
Fototry ny làlana (1-2). Fanambaniana an’Andriamanitra ny fivavahana sy fiankohofana amin’ny tsangambato sy sary vongana na zavatra hafa (vola, olona,). Sabata: fotoana natokana iarahana manompo an’Andriamanitra noho ny asam-pahariany (Eksodosy 20.11), sy ny asam-pamonjeny (Deotoronomia 5.15). Zava-dehibe ny fanajana ny sabata izay tsy voafetran’ny andro satria manambara ny fanafahana nataon’Andriamanitra (Deotoronomia 14-15). Izay no nahatonga an’i Jesoa Kristy nanafaka sy nanasitrana tamin’ny sabata. Ary koa anokanana ny alahady, andro nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, ho an’Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 20.7)
Toerana masina. Ho fanampiana ny Zanak’Israely tsy hanompo sampy no nahatonga an’Andriamanitra nametra ho Iray ny toerana hivavahana. Nanompo sampy be mantsy ny Zanak’Israely teo anelanelan’ny fanafahana tao Egypta hatreo amin’ny fahababoana. Josia no hany tokana nandrava ireo toerana avo nanaterana sampy. Maneho ny Testamenta Vaovao fa tsy miankina amin’ny toerana ny fivavahana amin’Andriamanitra. Tokana ihany no fomba ifandraisana amin’Andriamanitra: JESOA KRISTY, Ilay hany Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona (Jaona 14.6; Asan’ny Apostoly 4.12; Jaona 4.21-24).
Fitahiana ny mankato an’Andriamanitra (3-13). Mahazo ranonorana, vokatra tsara ary fiadanana (Matio 6.25-33) ary mitoetra eo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra (Eksodosy 25.8).
Loza ny tsy mankato ny tenin’Andriamanitra (14-20). Andriamanitra Tompon’ny sabata no nanao fanekena tamin’ny olony. Fanaovana tsinotsinona Azy ny tsy fihazonana ny fanekena. Fitsarana sy famaizan’Andriamanitra no ho setrin’izany. Ny tsy fahombiazana ara-panahy, amin’ny lafim-piainana rehetra, ny aretina, ny faharesena an’ady dia isan’ny endrika maneho izany.
Fanontaniana: Manao ho zava-dehibe ny asam-pamoronana sy ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra ve aho? Manao ahoana ny fitandremako ny sabata?